Faah faahino laga helayo dagaal Al-Shabaab & Ciidanka DF ku dhexmaray Gobolka Baay – War La Helaa Talo La Helaa
Faah faahino laga helayo dagaal Al-Shabaab & Ciidanka DF ku dhexmaray Gobolka Baay
By Xuseen Madoobe	 Last updated Jun 1, 2019
Wararka ka imaanaya deegaano ka tirsan Gobolka Baay ayaa waxay sheegayaan in dagaal khasaare dhaliyay uu ku dhexmaray Ciidamo ka tirsan Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo xoogag ka tirsan ururka Al-shabaab.
ka tirsan ururka Al-shabaab ayaa weerar ku qaaday Ciidamo ka tirsan Dowlad Goboleedka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Saldhigyo ay ku leeyihiin degmooyinka Bardaale iyo Qansax-dheere oo ka tirsan Gobolka Baay sidda ay xaqiijiyeen Mas’uuliyiinta degmada Bardaale.
Gudoomiyaha degmada Bardaale Maxamed Isaaq ayaa warbaahinta u xaqiijiyay weerarka ay kusoo qaadeen xalay Al-Shabaab degmada Bardaale, islamarkaana waxaa uu sheegay in ay si weyn iskaga difaaceen.
Waxaa uu sheegay in aysan jirin wax khasaaro ah oo soo gaaray Ciidanka dowladda ee ku sugan degmada, islamarkaana ay ku guuleysteen in ay dib u riixaan Al-Shabaabkii dagaalka soo qaaday.
Al-shabaab ayaa inta badan weeraro gaadmo ah waxa ay la beegsadaan fariisimaha Ciidamada Dowladda iyo kuwa Maamulka Koonfur Galbeed ay ku leeyihiin degaanada Maamulkaasi, iyada xilliyadaasi uu dhexmaro dagaallo khasaare geysta.
Mid ka mid ah shaqaalaha QM oo xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo & Xog laga helay cida dishay